Traning Course For All - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Traning Course For All
ဒီနေရာလေးကနေ တစ်ခုလောက်ကြော်ငြာလိုက်ဦးမယ် ... ဟိဟိ .. လင်းနစ်ကိုဝါသနာပါသူများ open source ကိုစိတ်ဝင်စားသူများ မည်သူမဆို လူမျိုးဘာသာမရွေးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် .. သင်တန်းက ကိုကိုရဲ အစီအစဉ်နဲပါ .. ဒီလင့်လေး (http://u4mm.com/)(http://www.ubuntu4mm.org/) မှာအပြည့်အစုံဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ...4.10.2010 စမှာပါ သင်တန်းက ... အားလုံးအတွက်မဟုတ်ခဲတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်တန်းစီစဉ်သူတွေ အနေနဲ့ ကျေနပ်ပိတိဖြစ်စရာပါ ... ဟဲဟဲ .. ကျွန်တော်တော့မပါဘူးနော်..ကျွန်တော်က လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးတာ ကြော်ငြာကို.... ပြိးတော့ ကျွန်တော်တိုလို ၀ါသနာတူတွေကို အများတန်းတူသိစေတတ်စေချင်တဲ့ စေတနာလေးကြောင့်ပါ .. နောက်တစ်ခုက Ubuntu LoCo Team ဖွဲဖိုပါ . အဲဒါကလည်း တော်တော်လေးကို ကောင်းတဲ့အစီစဥိလေးပါ .. လင်းနစ်ကို သုံးသူတိုင် သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်. .. နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူအဖွဲနဲသူ သီးသန်လေးတွေ လုပ်ပြီး အများအတွက် အကျိုးပြုနေကြ .. ခုအဲလိုမျိုး လေးဖွဲစည်းဖို အစီအစဉ်ရှိပါတယ် ... စိတ်ဝင်စားသူအားလုံး ဒီလင့်လေးကနေ သွားေ၇ာက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် .. ဖိုရမ်က ဂုရုများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် .. တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီနဲ အများကြီးပေါင်းလိုက်ရင် တစ်ကယ့်ကိုပြည့်စံကောင်းမွန်တဲ့ Loco Team လေးတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲခင်ဗျာ ...
ဒီလင့်လေးတွေမှာလည်း ရှိပါတယ် ..
ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် 73067123 မှာကိုကိုရဲ(kokoye2007@gmail.com) ရှိပါတယ်
ချစ်စရာလေးနော်..ဟိဟိ .. ပုဆိုးနဲတိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ ....
ဟိန်းသူအောင်, arkaraung, bonge, hellboy, kyaukphyu, KznT, nwmgmg
30-10-2010, 09:49 PM
ပြန်စာ - Traning Course For All
သွားကြည့်ချင်တယ်/ လုပ်ကြည့်ချင်တယ် အကိုရာ၊၊ တထောင့်တနေရာက ပါဝင်ခွင့်ရသလောက်ပေါ့ ၊၊ ဒါပေ မဲ့ ဒါတွေအားလုံးက ဆန္ဒ တစုံလောက်ဘဲ အရာရောက်တော့မယ်ဗျာ၊၊ ဘဝနှင့် ဆန္ဒ အပြင် ကိုယ် ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ဆိုပေမဲ့လို့ (မတတ်နိုင်လို့ မာန်လျော့) ဆိုသလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီဗျာ၊၊ အကိုတို့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီနှစ် အနေ အထားကလည်း သိတဲ့အတိုင်းဘဲလေ၊၊ ကို စေတန်ဂေါ့ ကလဲ ဒီနေရာလေးမှာ Myanmar Ubuntu LoCo Team ဆိုပြီး အသေးစိတ် ရှင်းပြထားဒါတော့ ရှိပါသေးတယ်၊၊ လက်ရှိအနေအထားအရတော့ တကယ်လည်း လုပ်နိုင်တယ် အချိန် လည်းရတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးကိုယ်ဘဲ လိုတဲ့ အကူအညီတောင်းရင် ရတဲ့နေရာ ရတဲ့အချိန်ကနေ ပေးရတော့မှာ အကိုရာ၊၊
ဟိန်းသူအောင်, arkaraung, hellboy, KznT
VTC ASP.NET (Video Traning) ကိုပိုင် E-books များ430-12-2016 11:17 AM